Ian Chan avy amin'ny Mirror Boy Group izao dia manohana ny Circle HealthPod
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Ian Chan avy amin'ny Mirror Boy Group izao dia manohana ny Circle HealthPod
Circle HealthPod dia rafitra fitiliana trano novolavolain'ny University of Oxford, miaraka amin'ny vokatra PCR ao anatin'ny 20 minitra eo ho eo. Ian dia mihira ny hira “Andro Vaovao Io” mba hanomezana hery ny olona hanohy ny fiainana ara-dalàna sy hitondrana vondrom-piarahamonina salama kokoa miaraka amin'ny Circle HealthPod.
Ny orinasam-panadinana ara-pahasalamana momba ny fototarazo sy ny diagnostika Prenetics Limited, dia niara-niasa tamin'ilay mpikambana malala ao amin'ny tarika ankizilahy malaza “Mirror,” Chan Cheuk-yin (Ian), mba ho masoivohon'ny vokatra sy mpanakanto amin'ny hiran'ny dokambarotra ho an'ny Circle HealthPod.
Ny Circle HealthPod dia rafitra fitiliana haingana manome valin'ny PCR ho an'ny COVID-19 ao anatin'ny 20 minitra eo amin'ny toeram-pitsaboana na any an-trano. Ny teknolojia revolisionera dia nivoady fa hanapaka ny sakana eo amin'izao tontolo izao ary hampitsahatra ny elanelana misy eo amin'ny tsirairay.
Novolavolain'ny Oniversiten'i Oxford, ny Circle HealthPod dia iray amin'ireo rafitra fanaraha-maso trano mandroso indrindra eran-tany. Izy io dia laboratoara habe am-paosy izay manome 98.4% marina amin'ny fitadiavana ny COVID-19, ao anatin'izany ny 99.9% amin'ny tsimokaretina fantatra toa ny viriosy variana Delta. Ny swab nasal fohy tsy misy fanaintainana dia ampiasaina hanangonana santionany alohan'ny hanamafisana ny asidra nokleika. Manodidina ny 20 minitra eo ho eo ny HealthPod handefasana vokatra kalitao PCR ho an'ny olona mivantana amin'ny HealthPod na amin'ny alàlan'ny fampiharana finday, mahatonga azy io ho mora, haingana, matihanina ary azo itokisana.
Ny fiaraha-miasa dia miara-miasa amin'ny masoivohon'ny vokatra vao haingana, Ian, mpikambana ao amin'ny tarika sampy malaza "Mirror." Namorona hira malaza maro tamin'ny alalan'ny hetsika sy tetikasa manokana nataon'i Mirror ny feo mahasarika an'i Ian, izay samy noraisin'ny mpankafy tamin-kafanam-po, ka nahafantarana an'i Ian tamin'ny toetrany mibaliaka masoandro sy amin'ny maha-solontena azy ho an'i Hong Kong. Ankoatra ny talentany amin'ny mozika dia atleta mahay ihany koa i Ian.
Amin'ny maha-mpikambana taloha azy ao amin'ny Ekipa Volleyball Lehilahy ao Hong Kong, tia fanatanjahantena, mpilalao basikety, ary mpankafy Taekwondo, dia mino ny maha zava-dehibe ny fahasalamana i Ian. Ny sarin'i Ian momba ny fahasalamana tsara dia mahatonga azy ho ambasadaoron'ny vokatra tonga lafatra, mandrisika ny olona hanohy ny fiainana ara-dalàna sy hitandrina ny fahasalamana. Ny mozikan'i Ian dia maneho ny tantaran'ny Circle HealthPod amin'ny fampidirana ny hafatry ny fahasalamana ara-batana sy ara-tsaina ao amin'ny tononkira amin'ny dokambarotra, manaparitaka feon-kira manintona izay manantena ny hanasitrana ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana vaovao izao.
Ny tanjon'ny Circle HealthPod dia ampitaina amin'ny hira "Andro Vaovao Io" nohirain'i Ian ary noforonina manokana ho an'ity vokatra ara-barotra ity. Raha mameno ny feony manandratra ny feon-kira mampientam-po., dia nihira momba ny nofinofy hifandray indray amin'izao tontolo izao, ny fiarahamonina ary ny olona manodidina azy i Ian amin'ny alalan'ny Circle HealthPod. Nambarany fa afaka mitondra fanamafisana, fiadanan-tsaina ary fiarovana ho an’ny fiarahamonina ny fitsapana. Danny Yeung, mpiara-manorina sy tale jeneralin'ny Prenetics, dia nilaza fa halefa ao amin'ny ViuTV ny andian-doka vaovao.